विश्वासको मत लिने तयारीमा बाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्य, संसदको अंकगणितले के भन्छ ? « Harekpal
विश्वासको मत लिने तयारीमा बाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्य, संसदको अंकगणितले के भन्छ ?
हरेकपल October 1, 2021
कानुनी बाध्यताका कारण बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी छन्। लामो समयसम्म एमालेमा माधव नेपाललाई साथ दिएर अन्तिम समयमा पार्टी विभाजनका बेला साथ नदिएकी शाक्यलाई एमलेले पुरस्कारस्वरुप मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।
नेपाल पक्ष एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि आफ्नो पक्षमा नआए शाक्यलाई समर्थन नगर्ने उद्घोष गरेको थियो । माधव पक्षको साथ नपाएपछि सरकार जोगाउन एमालेले गठबन्धनबाहिर रहेका विभिन्न दलसँग सहकार्यको प्रयास गरेको थियो । त्यसमा सम्भव नभएपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिने तयारी गरेकी हुन्।
एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेकी शाक्यले गत भदौ २ मा नेपालकै पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी थिइन्। एमालेबाट विभाजन भई बनेको एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले गत भदौ २५ मा मान्यता प्रदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेकी छन्। एमाले विभाजनपछि १३ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। अल्पमतमा परेकी शाक्यले असोज २५ भित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
बागमती प्रदेशमा सभामुखसहित १०९ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ। संसदमा कुनै पनि दलसँग सरकार गठनका लागि एकल बहुमत छैन।
संसदमा एमालेसँग ४३, नेकपा (माओवादी केन्द्रं)सँग २३, नेपाली कांग्रेससँग २२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग १३, विवेकशील साझासँग ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग २–२ तथा जनता समाजवादी पार्टीसँग एक सांसद छ।